राष्ट्रिय खबर बिशेष – rastriyakhabar.com
संविधान दिवसको अवसरमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ११ ले झण्डा पार्कमा यसरि फराइयो राष्ट्रिय झण्डा ( फोटो फिचर सहित)
काठमाण्डौ । संविधान दिवस २०७७ को अवसर पारेर बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ११ ले जगडोल झण्डा पार्कको झन्डा फेरेको छ । वडा नं ११का वडा अध्यक्ष राजु अधिकारीको उपस्थितमा झण्डा फेरिएको हो। कार्यक्रममा वडाका सबै जनप्रतिनिधि स्थानीय गरि २०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौको बूढानिकण्ठ नगरपालिका र..
विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सुुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सो नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी आन्तरिक..
जानि राख्नुः प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन खानुपर्ने ३ कुरा
बर्षायाममा विभिन्न रोगहरुको संक्रमणदर उच्च हुन्छ । कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरुमा यस्ता रोगको संक्रमण छिटै हुने गर्दछ । हाम्रा सानासाना लापरबाहि वा गल्तीहरुले हामीलाई रोगको संक्रमणको जोखिम उच्च बनाएको हुन्छ । त्यसैले, रोगको संक्रमण नहोस् भन्न हाम्रा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई..
बहु–आयामिक शैक्षिक कार्यक्रम सहित युवा उद्यमीले संचालन गरे मनास्लु वर्ल्ड कलेज (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौं । युवा उद्यमीहरुद्वारा स्थापित मनास्लु टिम अफ इन्टरप्रिनर प्रा.लि. द्वारा सन्चालित मनास्लु वल्र्ड कलेज बहु–आयामिक शैक्षिक कार्यक्रमहरु लिएर काडमाण्डौको मुटु शैक्षिक हव चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित पासाङ ल्हामु शेर्पाको सालिकबाट करिव १०० मिटर अगाडि नजिकै आधुनिक प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा..
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यकताले गरिने हो, त्यो म हेर्दै छु, विचार गर्दैछु र समीक्षा गर्दैछु: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको विवाद मिलिसकेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र अध्यक्ष प्रचण्डबीच..
नेपालमा यसरी हुँदो रहेछ कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको लाश ब्यबस्थापन
पुरुष ब्युटि टिप्स : अनुहार चम्किलो बनाउने ७.घरेलु तरिका (प्रयोग विधिसहित)
सुन्दरताको कुरा गर्दा जहिल्यै महिलाको कुरामात्र हुने गर्छ । तर आज हामी महिलाको नभएर पुरुषको सौन्दर्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । पुरुषले कसरी आफ्नो छालाको ख्याल गर्नसक्छन् त? त्यसका बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । हामीलाई थाहा छ कि पुरुषहरुको छाला महिलाको तुलनामा थोरै कडा हुन्छ, त्यसैले महिला र पुरुषको..
हिजोका र आजका कम्युनिष्टहरुमा धेरै भिन्नता भयो : खड्का
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाङका अध्यक्ष एवं समाजसेवी, टिकाराम खड्का संग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय खबर का लागि ५ नम्बर ब्युरो चिफ बिष्णु कुमार देवकोटाले गरेको कुराकानी । स्वागत छ यहा“लाई, राष्ट्रिय खबरमा ? धन्यवाद । तपाईको व्यस्तता आजभोलि केमा रहेको छ ? कोभिड–१९ का कारण..
Rastriyakhabar/DK Dhungana/Ram Hari Silwal Bahas
इतिहासमा कसैले नचिनेका बहादुर शाह ! प्रदेश साम्सद तथा भौतिक निर्माण मन्त्री रामेश्वर फुयालको पहलमा शान्ति बाटिकामा बहादुर शाहको रोचक प्रसङ्ग
प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना भाइरसको महामारी र पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादमा केन्द्रित रहेको छ । हेर्नुस् प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, आज म..
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को परिवर्तितरुपका विषयमा वैज्ञानिकहरुले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले कोरोनाको दोस्रो रुप कोभिड-१९ भन्दा दश गुणा धेरै खतरनाक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अमेरिकाको स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टिच्युटको तर्फबाट गरिएको अध्ययनमा कोरोनाको दोस्रो रुपमा..
राष्ट्रपतिको उद्घोष : देशमा अब ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली गरिबीका कारण खान नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । यो सरकारको..
वर्ष २०७६ लाई फर्केर हेर्दा !
सोमवार, बैशाख १, २०७७ मा प्रकाशित
रमेश दुलाल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रमा विभिन्न उदारचढाव झेल्लै वर्ष २०७६ हामीबाट विदा हुने तरखरमा छ । यस वर्ष सकारात्मक कम र नकारात्मक विषयका समाचारमा धेरै छाए । प्राकृतिक प्रकोप, सडक दुर्घटना, वैज्ञानिक उपलब्धी, विवादित राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापार घाटा लगायतका घटना वर्षमा चर्चा..